PIPA / SOPA: Olee otu afọ ojuju nwere ike igbu anyị | Martech Zone
PIPA / SOPA: Olee otu afọ ojuju nwere ike igbu anyị
Wenezdee, Jenụwarị 18, 2012 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewepu saịtị ha iji gbalịa ịlụ ọgụ na Iwu Nchedo IP (PIPA) / SOPA nke a na-enyocha ebe a na United States. Kama ịrịba n'ụgbọala ahụ ma mechie ebe nrụọrụ m, echere m na ọ ga-aba uru karịa ịkọrọ gị mmeghachi omume m.
Anyị nwere ihe karịrị 2,500 blog posts na Kwalite teknụzụ nke na enyere ụlọ ọrụ na ndị ahịa ahịa gburugburu ụwa aka. Anyị akwụbeghị ụgwọ maka ọdịnaya anyị ọ bụla, anyị agaghịkwa akwụ ụgwọ. Mgbe a wuru anyị, anyị na-ejikarị oge iji nyochaa ngwaahịa ma ọ bụ akụkọ a - anyị na-edekwa ozi ahụ na-akwụghị ụgwọ. Anyị enweela ihe ndekọ dị egwu site na ụlọ ọrụ ndị kwuru na anyị bụ naanị blọọgụ nke matara ma ọ dugara na ngosipụta dị ukwuu na uto maka ngwaọrụ ha.
Anyị nọ na aha mbụ na ọtụtụ na teknụzụ na ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze n'ihi na anyị nwere mmasị inyere aka. Ọ bụ ezie na blọọgụ ndị ọzọ na-achọ ịdọka ụlọ ọrụ ma ọ bụ teknụzụ, ị ga-ahụ na ozi anyị na-akwado nke ukwuu. Anyị chọrọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Anyị chọrọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na ngwọta. Anyị chọrọ ịchọta azịza ndị ahụ.
Otherlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado anyị site na nkwado. Zoomerang (ugbu a SurveyMonkey) bụ onye nkwado anyị nke izizi, a free online nghoputa software nke ahụ emeela kawanye ederede na mmekọrịta anyị na ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Delivra bụ email ahịa ụlọ ọrụ onye na-enye ọdịnaya na nyocha maka ndị na-ere ahịa email. Right Na mmekọrịta na-eduga akpaaka ahịa ngwọta onye na enyere anyi aka ighota ahịa ahịa niile.
Site na ndị nkwado anyị na ndị mgbasa ozi, anyị enweela ike ịnabata ahịa Podcast, na-emepe emepe akwụkwọ akụkọ email, anyị amalitela ịmepụta vidiyo ma anyị na-aga n'ihu ịkwalite ahụmịhe nke saịtị anyị. Ọbụna anyị nwere ngwa mkpanaaka n'akụkụ akuku! Webinars dịkwa na ndepụta anyị dị mkpirikpi. Ihe a niile bụ n'efu nye gị - ndị na - agụ akwụkwọ anyị. Ọ bụ ezie na anyị anaghị erite uru na blọọgụ ozugbo, a na-etinye ego ahụ iji nyere aka ị. N'ezie, anyị na-erite uru site na ịnwe premiere blog… mana enwere olile anya na ị na-eme, kwa.
Nke a nwere ike ịgbanwe.
Taa, anyị nwere nzukọ na ndị nnọchianya obodo anyị na Indiana iji kwurịta nchegbu anyị na ndị Chedo IP emume na SOPA. Ọ bụ ezie na ndị isi ahụ nabatara ya, ha ekwughi ma onye nnọchi anya anyị na-akwado ụgwọ ahụ. Nke a bụ ụfọdụ ozi - mana biko gụọ ihe edeturu m n'okpuru m na nchegbu m.
Banyere ndị nnọchi anya anyị, agbachitere DNS ahụ ma chọọ onye ọzọ iji chọpụta ma ọ ga-egbochi saịtị ahụ. Nkọwa okwu ahụ dabere na saịtị naanị saịtị nwere ike igbochi bụ saịtị ndị mba ọzọ. Abughi m onye ọka iwu, yabụ echeghị m na nke ahụ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ihe nwere ike ime ozugbo, na-enweghị usoro ziri ezi, bụ na saịtị a na-ewere dị ka ịkwado mmebi iwu nwebisiinka nwere ike wepu ya na engines ọchụchọ yana ụzọ niile nke mgbasa ozi mgbasa ozi egbochi. Nke a nwere ike ime na-enweghị ọkwa na enweghị ike saịtị iji chebe onwe ya. Nleta igwe nyocha anyị na ego anyị nwetara bụ ọbara nke na-ekwe ka blọọgụ a bawanye na-agbasa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iwu na iwu nke chọrọ ịga agha na ọdịnaya anyị na-ekerịta… enwere ike ịnyagbu ọnwu anyị na enweghị enyemaka ọ bụla.
E mesiri m obi ike na ekwentị na nke a enweghị ike ịpụta, na anyị ga-enwe ike ị nweta nnọchite anya ma lụọ ọgụ. Nke a bụ nsogbu… nke na-ewe oge na ego m na-enweghị dịka obere azụmaahịa. Yabụ, kama ịlụ ọgụ, ọ ga-aka mma ka m daa saịtị ahụ wee laghachi ma rụọ ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ. Nke ahụ na-emenye ụjọ.
Washington bụ obodo jupụtara na ndị ọka iwu. Ha anaghị echetakarị na ndị anyị na-enweghị ikike iwu anaghị agbachitere onwe anyị nke ọma. Nke a, n’uche nke m, ọ bụ ihe echedoro IP na SOPA Ọrụ ka ha mee. Ha bụ ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ - ikpuchi ikpeazụ iji gbalịa igbochi ihe a na-apụghị izere ezere. Ihe atụ ahụ m nyere bụ onye na-ere ahịa nke jụrụ itinye mkpọchi n'ọnụ ụzọ ha. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịchọpụta etu ha ga-esi chebe onwe ha, ha na-arịọ gọọmentị ka ha chebe ya maka ha.
Anaghị m ede ihe a naanị site na otu blogger. Anyị na-enye ọdịnaya yana atụmanya na a ga-asọpụrụ ikike nwebisiinka anyị. N'oge ụfọdụ ọ bụghị na m emewo ihe. Enweela m ike igbochi saịtị, kọọrọ ha sistemụ mgbasa ozi, ma nwee ụlọ ọrụ ndị ọzọ - dịka ụlọ ọrụ foto ngwaahịa - na obere akpa na-eso ha. Nke ahụ pụtara na obere ol 'Doug enwela ike igbochi ịda iwu ma lụso ya ọgụ na enweghị gọọmentị itinye aka na ya. N'ezie, nke a abụghị maka ọgụgụ isi m n'agbanyeghị - ọ bụ maka ihe nkiri na ụlọ ọrụ ndekọ ndekọ na-emebiwanye uru.
Ọ jọgburu onwe ya. Ọ bụ ihe nwute na ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-eche n'echiche ime nke a. Ọbụna ihe jọgburu onwe ya bụ na a ochichi onye kwuo uche ya onye ndu, Chris Dodd, bụ ugbu a onye ndu nke ike a nke ga-akụri isi akụkụ nke ịntanetị - ikike ịkekọrịta ozi n'efu. Nke a bụ ụgwọ nke ga-eme ka ndị nwere akpa miri emi nwee ike… ma wepụ ohere na enweghị ike. Ọ ga-emetụta onye ọrụ ọ bụla na ịntanetị, gụnyere gị.
Biko wepụta oge iji gụọ ọmarịcha nkọwa ma ghọta etu ọ ga-esi emetụta gị, ọdịnaya gị, yana azụmaahịa gị. Kwesighi ịbụ onye America, ịntanetị enweghị oke ala anyị nwere ike itinye ndị agha na… na ndị nọ na United States n'ihe ize ndụ ka ukwuu karia ka ayi. Gụkwuo na Kwụsị mmachi America.
Kedu teknụzụ na-egbu
Ọrụ Social anyị na Social Media
Jan 18, 2012 na 2: 22 AM
Okwu gị na “Kama ịlụ ọgụ, ọ ga-aka mma ka m daa saịtị ahụ wee laghachi rụọ ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ. Nke ahụ na-emenye ụjọ. ”
Echere m na ị tụrụ ntu ahụ n’isi ebe ahụ.
Ma eleghị anya, m na-eleghị anya dị ka obere onye nwe ụlọ ọrụ, ma ihe niile m na-ahụ site na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gafee ụlọ na-agba anyị ume ka anyị were ọrụ dị ka cog na usoro ka ukwuu. Nwere obere agbamume maka ndị America na-azụ anyị entrepreneurial mgbọrọgwụ & na "American Nrọ" e ghọọ ụfọdụ ụdị "ikike" ngwugwu. Nnukwu azụmaahịa anaghị enweta ego mgbe obere azụmaahịa anaghị enwe ike ịnweta mgbazinye ego n'oge a.
Ihe a niile ị ga-ekwu, Ọrụ SOPA & PIPA yiri ka ọ dabara na nke ahụ. Enwere m olileanya na a ga-agbatu ha kpamkpam, mana ịmara ndị ọka iwu na Washington, nke a agaghị abụ nke ikpeazụ anyị nụrụ banyere ụdị Ọrụ ndị a.
Pịa nwanne, ka ị ga-emekwa ihe ị na-eme.
Jan 18, 2012 na 11: 41 AM
Okwu Brian na-egosi ihe na-eme na nke anyị
mba ruo ihe karịrị afọ 150 gara aga, nke ahụ bụ nnukwu mgbalị
ụlọ ọrụ dị ka gọọmentị, ijikwa ndụ ndị dịtụ
enweghị ihe nchebe. Gọọmentị anyị emeela mmemme mmekọrịta mmadụ na ibe ya
wepụ echiche ọ bụla nke ibu ọrụ onwe onye na mkpali nke ime
site n'aka ndị mmadụ na-eme ka ha dabere na sistemu na-atụ egwu
nke ahụ erughị ala ma ọ bụ mmerụ ahụ na-egbochi ha ịhapụ (izu 79 anyị
enweghị ọrụ mkpuchi ọrụ bụ ihe atụ zuru oke). Ọchịchị anyị bụ
jiri nwayọ nwayọ nwayọ na-aga ije iji kwụsị ọrụ achụmnta ego site na
na-ewepụ ụgwọ ọrụ ọ nwere ike iburu ndị mmadụ n'otu n'otu (site na ụtụ isi,
ụkpụrụ, socialism, na ndị ọzọ) na site na ịjụ ịghọta na ọ bụ
otu n'ime ihe ole na ole kwere ka America too n'ime ụwa
ike site na mmalite ya ruo na narị afọ nke 20.
Jenụwarị 18, 2012 na 12:29 PM
Nnukwu arụmụka, emeela nke ọma. A ghaghị ịkwụsị SOPA.
Ndị nhazi agbamakwụkwọ
Jenụwarị 18, 2012 na 6:17 PM
Kwụsị "SOPA" dị mma. Na-eme ka m chee onye, ​​gịnị & ihe kpatara nke a - Onye nọ n'azụ SOPA?
Aga m agwa gị ụmụaka… ọ bụ maka otu ihe “njikwa”